WhatsApp ကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်လှည့်ကွက် | Gadget သတင်း
Villamandos | | မိုဘိုင်း, WhatsApp ကို
WhatsApp သည်ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာအနှံ့အသုံးပြုသူအများဆုံးနှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းအသုံးပြုသူအားလုံးတွင်လူကြိုက်အများဆုံးချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ဖြစ်သည်။ ငါထင်တာကတော့စစ်မှန်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့အဲဒါကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်ကိုသင်မရောက်ရှိသေးဘူးဆိုရင်၊ သင့်ကို WhatsApp စစ်မှန်သောဂုရုဖြစ်ရန်လှည့်ကွက် ၁၀ ခုသင်သည်ဤလူကြိုက်များသော application ကိုအသုံးပြုသောအချိန်တိုင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုရယူပါ။
ခဲတံနှင့်စက္ကူကိုထုတ်ယူပါသို့မဟုတ်မှတ်စုရေးရန်အခြားနည်းလမ်းကိုရှာပါ။ ယနေ့သင်သည်ဤဆောင်းပါးတွင် WhatsApp ကိုသင်လေ့လာပြီးဖြစ်သည့်သင်ထက်ပိုမိုပြီး၊ စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်များစွာလေ့လာသင်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန်သတိရပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အောက်ဖော်ပြပါသင်ခန်းစာများကိုသင်ကြားသွားမည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်၊ ၎င်းတို့ကိုသင်ချက်ချင်းစမ်းသပ်ရန်လိုလိမ့်မည်။
2 ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်မပြုလုပ်နိုင်စေရန် WhatsApp ကိုပြင်ဆင်ပါ
3 အုပ်စုတစ်ခုသို့အုပ်ချုပ်သူတစ် ဦး ထက်ပိုထည့်ပါ
4 spam အဖြစ်သတင်းပို့ပါ
8 WhatsApp ပြောဆိုမှုများကိုပြန်လည်ရယူပါ
9 သင်၏ SIM ကဒ်ထက်အခြားနံပါတ်ကိုသုံးပါ
၏ထို option နေသော်လည်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဖြန့်ချိခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုဖတ်ရှုရန်မလွယ်ကူကြောင်းတွေ့ရှိနိုင်သည်, များစွာသောအသုံးပြုသူများသည်ဤ option ကိုသို့မဟုတ်အလေ့အကျင့်ဘယ်လိုထားရန်မည်သို့မည်ပုံမသိသေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ မည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုစာဖတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ၊ စာတို (သို့) အများအပြားကိုမဖတ်ရသေးတဲ့အရာအဖြစ်မှတ်သားနိုင်လိမ့်မယ်။
မည်သည့်စကားပြောဆိုမှုကိုမဆိုဖတ်လို့မရအောင်အမှတ်အသားပြုနိုင်ရန်အတွက်၊ သင်စကားဝိုင်းကိုစဉ်ဆက်မပြတ်နှိပ်ရန်သင်အတွက်လုံလောက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အခြားအသုံးပြုသူ၏အပြာရောင်စစ်ဆေးမှုကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးမည့်စကားဝိုင်းပေါ်တွင်အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်းငယ်လေးတစ်ခုချပေးလိမ့်မည်။ ငါတို့မဖတ်ဘူး
ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်မပြုလုပ်နိုင်စေရန် WhatsApp ကိုပြင်ဆင်ပါ
လအကုန်တွင်သုံးစွဲသူအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်းနှင့်မျှတမှုရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် WhatsApp သို့မဟုတ် Facebook စသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများကို WiFi ကွန်ယက်နှင့်ချိတ်ဆက်မထားပါကအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကစားခြင်းမပြုရန်အတွက်လိုအပ်သည်။
သင် WhatsApp ကိုအလိုလိုပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများကိုအလိုအလျောက်မကူးယူစေလိုပါက အခြားအဆက်အသွယ်တစ် ဦး ကကျွန်ုပ်တို့ကိုလွှတ်လိုက်သည်မှာသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရုံသာဖြစ်သည်။
WhatsApp ကိုဖွင့်ပြီးညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာတွေ့ရမယ့် menu ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေထဲကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အရာကပြောတယ် မာလ်တီမီဒီယာကိုအလိုအလျောက် download လုပ်ပါ.
ဤရိုးရှင်းသောလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ပို့သောအကြောင်းအရာများကိုအလိုအလျောက် download လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် WiFi ကွန်ယက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းမရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဒေတာနှုန်း၏ megabytes သုံးစွဲမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
အုပ်စုတစ်ခုသို့အုပ်ချုပ်သူတစ် ဦး ထက်ပိုထည့်ပါ
WhatsApp အုပ်စုများသည်လူနည်းစုသာဖြစ်နိုင်သော်လည်းအချို့တွင်အဖွဲ့ဝင်များစွာရှိသောကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့ကိုညွှန်ကြားရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်မှာမဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီအဘို့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနိုင်ပါတယ် တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုထဲကို administrator တစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးထည့်ပါ.
အုပ်စုတစ်စုတွင်စီမံခန့်ခွဲသူတစ် ဦး ထက် ပို၍ ရှိလိုပါက၊ ထိုအုပ်စု၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်အဖွဲ့၏သတင်းအချက်အလက်ရောင်းဝယ်မှုကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်အုပ်ချုပ်သူဖြစ်လိုသူအသုံးပြုသူကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေထဲက "Make group administrator" ကိုရွေးရမယ်။
WhatsApp သည်အလွန်လုံခြုံသောအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုမဟုတ်သောကြောင့်နာမည်ကြီးသည်။ ဥပမာ၎င်းကို Telegram နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုအခြားအသုံးပြုသူများထံမှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးချယ်စရာများ သူတို့ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုမသိဘဲတောင်မှကျွန်တော်တို့ကို junk မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့။
သင်၏လိပ်စာစာအုပ်တွင်သင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိသောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမှမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိသူနှင့်သင်မသိသောမည်သူမဆိုသည်၎င်းကို spam အတွက်အမြဲတမ်းသတင်းပို့နိုင်သည်၊ ၎င်းအား spam အတွက်သတင်းပို့နိုင်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အစပိုင်းတွင်သင်မသိသေးသောအသုံးပြုသူမှ စ၍ spam အကြောင်းမည်သူသတင်းပို့သည်ကိုသတိပြုပါ။ သင်သူ့ကိုမကြာမီသင်မှတ်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သိလာပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုရေးသားပြီးမိနစ်ပိုင်းလွန်လျှင်၊ ဘယ်သူမှမဖြေလျှင်၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အချက်နှစ်ချက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမတစ်ခုကလူတိုင်းကသင့်ကိုအလုပ်များနေသဖြင့်သို့မဟုတ်သတင်းကိုမဖတ်ရသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အုပ်စုတွင်မဆိုအလွယ်တကူစစ်ဆေးနိုင်ပြီးအောက်တွင်ရှင်းပြပါမည်။
အကယ်၍ သင်၏စာကိုအမြဲတမ်းနှိပ်လျှင်၊ သင်မြင်နိုင်သည့်ထိပ်တွင် option drawer တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည် သတင်းအချက်အလက်သင်္ကေတ။ သင်ထို icon လေးကိုနှိပ်ပါ သင်၏သတင်းစကားကိုထိုအဖွဲ့ ၀ င်အားလုံးထဲမှမည်သူသိသည်ကိုသင်သိရှိနိုင်လိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူဖတ်ပြီးသားဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့သူဘာမှမသင်ယူဘူး၊ ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိရပါ။
လွန်ခဲ့သောအချိန်က WhatsApp သည်အရေးကြီးသောအသစ်အဆန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းခဲ့သည် အသုံးပြုသူမည်သူမဆိုအခြားသတင်းစကားတစ်ခုဖတ်ရှုခြင်းရှိမရှိသိစေနိုင်သည့်အပြာရောင်စစ်ဆေးမှု။ များစွာသောသူများအတွက်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံး ၀ င်သည့်အသစ်အဆန်းတစ်ခုထက်မကသော်လည်းအခြားသူများကမူသူတို့ကိုဒေါသတကြီးဝေဖန်သော privacy ကိုကျူးကျော်မှုအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။
ဒီအပြာရောင်စစ်ဆေးမှုကိုပြစ်တင်ဝေဖန်သူတွေအားလုံးအတွက် WhatsApp ကဖြေရှင်းချက်တစ်ခုချလိုက်ပြီ။ ဒီဟာကဘယ်သူ့ကိုမှဒီဖတ်ခြင်းအတည်ပြုချက်ကိုပိတ်ထားလို့ရတယ်။
၎င်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်မှာရိုးရှင်းပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings၊ Account သို့သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင် Privacy menu ကိုသွားရမည်။ ယခုတွင် ၀ န်ဆောင်မှုကိုရပ်တန့်ပြီး Check အတည်ပြုချက်ကိုဖတ်ပါ။
WhatsApp ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီရေးရန်ခွင့်ပြုသော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲ၊ ဥပမာ - မွေးနေ့များကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများနှင့်မတူသည့်အချက်များအတွက်တကယ်အသုံးဝင်သောအစီအစဉ်ချထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများကိုပို့ရန်မတတ်နိုင်ပါ။
သို့သော်လျှောက်လွှာကိုကျေးဇူးတင် Seebye အချိန်ဇယား ကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့လိုသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်တွင်မည်သည့်စာကိုမဆိုလွယ်ကူစွာစီစဉ်နိုင်သည်။ ဤအပလီကေးရှင်းသည်အမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ Android operating system ရှိသည့်ထုတ်ကုန်များအတွက်တရားဝင်ဂူဂဲလ်အက်ပလီကေးရှင်းသို့မဟုတ် Google Play အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ရေးသားသူ: seebye ပါ
WhatsApp ၏စကားပြောဆိုမှုများသည်သင့်အတွက်အထူးတန်ဖိုးရှိပြီးရက်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်သည် backup လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုရှင်းပြပါ ဤဆောင်ပါးချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့စကားပြောဆိုမှုများကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည့်နောက်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုအဆိုပြုသွားပါမည်။ ဥပမာအားဖြင့်စမတ်ဖုန်းတစ်ခုမှနောက်တစ်ခုသို့ပြောင်းလဲသောအခါဤသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သငျသညျလိုလျှင် သင်၏ WhatsApp ပြောဆိုမှုများကိုပြန်လည်ရယူပါ ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာပါ။
သင်၏ terminal အဟောင်း၏စကားဝှက်များကိုအရန်ကူးပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်သင်သည် Settings၊ Chat settings မှပြုလုပ်ပြီးယခုပြောဆိုမှုများသိမ်းဆည်းရန် option ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်၏စက်ကိုကွန်ပြူတာဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ WhatsApp ကို / Databases ဖိုင်တွဲ။ အဲဒီမှာ "msgstore" နဲ့စတဲ့ဖိုင်ကိုရှာမယ်။ သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းဆည်းပါ။
WhatsApp ကိုသင်၏စမတ်ဖုန်းအသစ်တွင်တပ်ဆင်ပါ၊ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆို application ကိုမဖွင့်ပါနှင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သမျှသည်အသုံးမကျပါ။
WhatsApp အပလီကေးရှင်းကိုသင်စဖွင့်သည့်အခါသင့်အနေဖြင့်သင်၏ terminal အဟောင်း၌သင်စတင်ခဲ့သည့်အပြည့်အစုံစကားပြောဆိုလိမ့်မည်။
သင်၏ SIM ကဒ်ထက်အခြားနံပါတ်ကိုသုံးပါ
သငျသညျလိုလျှင် WhatsApp တွင် SIM ကဒ်ထက်အခြားနံပါတ်ကိုသုံးပါ အချို့ကိစ္စများတွင်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်နိုင်သည့်ကိရိယာအတွင်း၌ရှိသည်၊ သင်ဤရိုးရှင်းသောအဆင့်များကိုလိုက်နာရမည်။
သင်အသုံးပြုလိုသောနံပါတ်၏ SIM ကဒ်ကိုထည့်ရန်အခြားမိုဘိုင်းကိရိယာတစ်ခုရယူပါ။
WhatsApp ကိုသင်မတူသောနံပါတ်တစ်ခုရှိရန် terminal ကိုဖယ်ထုတ်ပါ WhatsApp တွင်သင်ပုံမှန်သုံးလေ့ရှိသည်။
အတည်ပြုနံပါတ်တောင်းခံရန်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ကိုထည့်သွင်းပါ။
အခြားဖုန်းဖွင့်ပြီး၎င်းကို SIM အတွင်း၌ထည့်ပါ။
အခြား terminal တွင်သင်၏နံပါတ်အဟောင်းကိုရောက်ရှိရန်အတည်ပြုကုဒ်ပါသော SMS ကိုစောင့်ပါ။
အတည်ပြုနံပါတ်ကိုထည့်ပါ အသစ်ကဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူ terminal မှာ။
အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပြီဆိုလျှင်သင်၏ SIM နှင့်မတူဘဲအခြားနံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူ WhatsApp ရှိသင့်သည်။
သင့်ကိုဘယ်သူ့ကိုမှမထိန်းချုပ်စေချင်ဘူး၊ WhatsApp ကိုသင်နောက်ဆုံးဘယ်အချိန်ထည့်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာမသိရင်အဲဒါကိုလုပ်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းက သင်၏နောက်ဆုံးဆက်သွယ်မှုအချိန်ကိုဖုံးကွယ်ထားခြင်း။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချက်ချင်းလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေး application ၏ Settings ကိုသွားပြီး Account option ကိုသွားပြီး Privacy ကိုရွေးချယ်ပါ။
ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဆောင်းပါး (၁၀) ခုအားဖြင့်စစ်မှန်သော WhatsApp ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » WhatsApp ကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ဖို့လှည့်ကွက် ၁၀ ခု